Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Badbaadada Safarka & Xaaladaha Degdega ah » Mareykanka oo u diyaargaroobaya duufaanta Henri
Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka • Wararka kala duwan
Iyada oo xawaaraha dabayshu hadda ku dhowdahay 75mph, Henri ayaa la filayaa inuu garaaco Long Island ama koonfurta New England Axadda.
Duufaanta Tropical Henri oo loo rogay duufaan.
Digniino cimilo oo daran ayaa laga soo saaray dhammaan waqooyi -bari Mareykanka.
Roobab xooggan ayaa la filayaa, iyadoo Xarunta Duufaanta Qaranka ay ka digtay in roobabka ay gaaraan ilaa 10 inji meelaha qaar.
Duufaanta Tropical Henri ayaa maanta kor loogu qaaday heer duufaan ah oo ay samaysay Xarunta Duufaanta Qaranka ee Maraykanka. Henri ayaa laga casriyeeyay duufaantii kulaylaha ilaa duufaantii subaxnimadii Sabtida, waxaana la filayaa inuu soo gaaro dhulka Axadda.
Maamulaha FEMA Deanne Criswell
Digniino cimilo oo aad u daran ayaa laga soo saaray dhammaan waqooyi -bari Mareykanka, iyadoo Hurricane Henri ay ku socoto waqooyi -galbeed dhanka Atlantic.
Iyada oo xawaaraha dabayshu hadda ku dhowdahay 75mph, Henri ayaa la filayaa inuu berri garaaco Long Island ama koonfurta New England.
Haddii ay ku dhufato Long Island, waxay noqonaysaa duufaantii ugu horreysay ee halkaas ka dhacda tan iyo Gloria sannadkii 1985. Haddii ay ku dhacdo dhulka New England, waxay noqonaysaa duufaantii ugu horraysay ee sidaas samaysa tan iyo Bob sannadkii 1991, kaas oo dilay 15 qof, biil ka badan $ 1.5 bilyan oo magdhow ah.
Henri wuxuu hadda u keenayaa xawaaraha dabaysha oo qiyaastii 75mph (120kph) xagga Maraykanka ah, waxaana la filayaa inuu xoogeysto marka uu dhulka ku soo dhowaado. Digniinaha duufaanka ee duufaanta ayaa laga soo saaray New York ilaa Massachusetts. Gudoomiyaasha goboladaan, iyo sidoo kale Connecticut iyo Rhode Island, waxay ku taliyeen in laga hortago safarka aan loo baahnayn. Connecticut iyo Massachusetts waxay sidoo kale ugu yeereen xubnaha Ilaalada Qaranka inay waajibaad firfircoon u diyaariyaan imaanshaha Henri.
Roobab mahiigaan ah ayaa la filayaa, iyadoo Xarunta Duufaanta Qaranka digniinta ilaa 10 inji oo roob ah meelaha qaar. "Roobab culus oo ka da'ay Henri ayaa laga yaabaa inay dhaliyaan daadad aad u badan, magaalo, iyo daad yar," ayay xaruntu ku talisay, iyadoo raacisay in "duufaan ama laba" laga yaabo inay ka dhacdo New England Axadda.
New England ayaa horeba loo qooyay ka dib dhowr toddobaad oo roobab culus. Hay'adda Maareynta Degdegga ah ee Federaalka (FEMA) maamulaha Deanne Criswell ayaa Sabtidii sheegtay in xaaladdan biyo -mareenka ahi ay la micno tahay in Henri uu si fudud u rujin karo geedaha iyo khadadka korontada, taasoo laga yaabo inay keento maalmo go'an.
"Waxaan arki doonnaa koronto la'aan, waxaan arki doonnaa geedo hoos u dhacay, xitaa ka dib markii duufaanku dhammaado, halista geedaha iyo addimada soo dhacaya ayaa weli taagan," ayay tiri.